OGEYSIIN & BUSHAARAYN: Dhammaan Akhyaarta Ku Taxan Webkayaga RAACDO.COM | Raacdo Media
Home Aragtida Dadweynha OGEYSIIN & BUSHAARAYN: Dhammaan Akhyaarta Ku Taxan Webkayaga RAACDO.COM
adminApr 25, 2018Aragtida Dadweynha, Diinta, Muhiim, Muxaadarooyin, News, Suugaan0
Walaalayaal sida aanu filayno inaad la socoteen waxaa bilahan dambe oo dhan jirtay dibu-dhac baaxad leh oo ku yimi Webkayagan Raacdo.com. Dibu-dhacaasi Waxaa keenay cillado aad u fara badan oo lasoo dersay isla markaana curyaamiyey Webka.
Cilladuhu ma aanay ahayn kuwo loo maaro waayey waxay-se ahaayeen kuwo iska fudud balse la hagraday. Sidaasi darteed waxaanu haatan ka fikirnay sidii nusqaantaasi oo kale aanay mar dambe noogu dhici lahayn isla markaana dedaalkii iyo wakhtigii aanu ku bixinay aanu nooga hagaasi lahayn bi’idnillaah.
Waxaanu muddo abla-ablaynaba, kama-dambaystii waxaanu soo saarnay go’aan ah in gabi-ahaantiisba laga wareego webkan, lana yagleelo Shabakad cusub oo qalabkeedu u dhan yahay, hadday noqoto dhanka farsamada, cillad-saarista iyo wixii la mida.
Haddii aan idiin soo qaddimo magaca Webka cusub ee dhidibada aanu taagnay waa FOOLAAD, Waxaanan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo sida magaciisaba ka muuqata Foolaad-ka Warbaahinta ku hadasha Afka Soomaaliga. Waxaana loo galayaa sidan http://www.foolaad.com.
Shabakadda FOOLAAD waa Waa Website ka fudud kana baaxad weyn kii hore ee Raacdo. Hawl-wadeennadiisu waa kuwii aad horeyba ugu soo barateen Raacdo. Himiladiisuna waa kor-u-qaadista diinteena suuban ee Islaamka. Hal-ku-dheggiisana horeyba waad u taqaaneen waana Warar Sugan, Diinteena Suuban & Suugaan.
Wax alla wixii aad kala socon jirteen Webka Raacdo, waxaad Insha Allaah kala socon doontaan, isla markaana aad ka helaysaan Shabakadda FOOLAAD. Waxaana dhanka cillad-ka-saaristeedana hadh iyo habeen-ba heegan u ah Injineer si weyn ugu takhasusay IT-ga.
Guntii iyo gunaanadkii waxaanu idin leenahay ha moogaanina http://www.foolaad.com/ oo bi’idnillaahi Kariim noqon doona Shabakad hir-gasha oo hana-qaadda. Waxaana sidii aad horeyba nooga barateen idiin soo gudbin doonaa Warar Hufan iyo weliba wixii aanu u aragno inay faa’iido inoo leeyihiin.
Shabakadda Foolaad Kala Xidhiidh:
Next PostOGEYSIIN & BUSHAARAYN: Dhammaan Akhyaarta Ku Taxan Web-kayaga RAACDO.COM